मुख्य न्यायाधिवक्तामा बास्तोला र नीति योजना आयोग सदस्यमा अधिकारी नियुक्त — donnews.com
मुख्य न्यायाधिवक्तामा बास्तोला र नीति योजना आयोग सदस्यमा अधिकारी नियुक्त
पोखरा । गण्डकी प्रदेशको मुख्य न्यायाधिवक्तामा अधिवक्ता रोहितराज बास्तोला र नीति तथा योजना आयोगमा डा.सुवास अधिकारी नियुक्त भएका छन् । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले डा. अधिकारीलाई र यसअघिको बैठकले बास्तोलालाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो ।
प्रदेश प्रमुख सीता पौडेलले संविधानको धारा १६० अनुसार मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा बास्तोलालाई नियुक्त गरेकी हुन् । मुख्य न्यायाधिवक्ता प्रदेश सरकार र मुख्यमन्त्रीको मुख्य कानुनी सल्लाहकार हुन् ।
मुख्य न्यायाधिवक्ताको मर्यादाक्रम उच्च अदालतको न्यायाधीश सरह हुन्छ । संवैधानिक एवं कानुनी विषयमा प्रदेश सरकार वा प्रदेश सरकारले तोकिदिएको अन्य अधिकारीलाई राय सल्लाह दिनु मुख्य न्यायाधिवक्ताको कर्तव्य हुनेछ ।
उच्च अदालत बार एसोसिएसन पोखराका पूर्व अध्यक्ष समेत रहेको बास्तोला डेमोक्रटिक लयर्स एसोसिएसन कास्की पूर्वअध्यक्ष हुन् । २५ वर्षदेखि कानुन व्यवसायमा क्रियाशील बास्तोला पोखरा ११ फूलबारीका स्थायी बासिन्दा हुन् ।
यसैगरी, नीति तथा योजना आयोगमा तनहुँ म्याग्देका डा. अधिकारीलाई आयोगका उपाध्यक्ष डा. रघुराज काफ्लेले सोमबार सपथ ग्रहण गराएका छन् ।
आयोगका अध्यक्ष समेत रहेका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल, शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान, प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्री कुमार खड्काको उपस्थितिमा उपाध्यक्ष काफ्लेले सपथ गराएका हुन् । सपथमा मुख्य न्यायाधिवक्ता रोहितराज बास्तोला, मन्त्रालयका सचिव लगायत सहभागी थिए ।
३८ वर्षे अधिकारी युनिभर्सिटी अफ चाइनिज एकेडेमी अफ साइन्सेजबाट वातावरण विज्ञानमा विद्यावारिधि हुन् । उनी भारतको बैंगलोर युनिभर्सिटी भारतबाट माइक्रो बायोलोजीमा स्नातक गरेका छन् ।
युनिभर्सिटी अफ चाइनिज एकेडेमी अफ साइन्सेजबाट एक्सलेन्ट इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट अवार्ड समेत प्राप्त गरेका छन् । उनीसँग जनप्रिय बहुमुखी क्याम्पस पोखराको माइक्रोबायोलोजी र बायोलोजी विभाग प्रमुखको कार्यानुभव छ ।
उनले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जर्नलमा विज्ञान प्रविधि तथा अन्य विषयहरुमा अनुसन्धानमूलक दर्जनौं लेख प्रकाशन गरेका छन् ।